Tetikasa fanondranana ho an'ny renirano Jhelum akaikin'i Kashmir eo amin'ny lalana marina
Jammu sy Kashmir: Tetikasa Jhelum amin'ny renirano mahitsy
Septambra 24, 2012
Tetikasa fanentanam-po iray hamonjy ny renirano Kashmir niaina an'i Jhelum dia nanomboka namoaka voka-tsoa tamin'ny governemantan'i Jammu sy Kashmir izay nitazona ny fandrahonana tondrain'ny orana tsy nitsahatra tato ho ato noho ny fepetra mitohy amin'ny fikajiana ny renirano ao avaratr'i Kashmir.
Jhelum izay loharanom-pandrobiana be amin'ny lohasaha dia potiky ny halatra be loatra tato anatin'ny taona vitsivitsy. Raha tsy misy fepetra arovana, dia very ny fahitana ny renirano ary nahatonga ny fanakanana ny fantsom-pivoahany miraoka any Baramulla, ary mety hiteraka tondra-drano any amin'ny Lohasahan-driaka izany.
"Ny tohin'ny asa fikajiana ny asa ao Jhelum any amin'ny distrikan'i Baramulla dia nahomby satria vitantsika ny nandroaka ny fandrahonana tato ho ato. Tamin'ny alàlan'ny fanodinana tsy tapaka no nesorinay ny sakana tany amin'ny renirano tao Baramulla ary nampitombo ny fahaizan'ny rano mandeha amin'ny renirano," Taj Moses-ud-Din, Minisitry ny Fanaparitahana sy ny Fanondranana tondra-drano dia nilaza tamin'i Greater Kashmir.
Avy any Verinag ao atsimon'i Kashmir, i Jhelum dia ampidirina renirano efatra, Sundran, Brang, Arapath ary Lidder ao atsimon'i Kashmir's Islamabad (Anantnag). Ankoatra izany, ny renirano kely toa an'i Veshara sy Rambiara dia mamelona rano ihany koa amin'ny renirano.
Jhelum meanders amin'ny lalana bitika avy any atsimo ka avaratra Kashmir ary mipetraka ao Wullar, farihy rano be indrindra any Azia, alohan'ny handatsahany an'i Pakistan nitantana an'i Kashmir tamin'ny alàlan'i Baramulla. Nilaza ny manam-pahaizana fa ny tondra-drano nahatsiravina tao 1959 dia nahatonga fiantraikany amin'ny rano tany Jhelum noho ny fipoahan'ny rano avy any Wullar Lake any avaratr'i Kashmir izay saika niharan'ny fanangonana fantsona mangatsiaka sy tery.
"Nesorinay ny fidiram-bazana an-taonina maro tao amin'ny fantsom-bolany Mahavita mamelona tena ny Jhelum Conservation Project satria ny fivarotana ilay valizy nalaina am-bavam-panjakana tamin'ny roa volana lasa izay. Izahay dia hampiasa io vola amin'ny fikajiana lava ny renirano io,”Hoy ​​i Taj fa ny fampidirana ireo dredger vita amerikana roa dia nanafaingana ny fizahana fikajiana.
Ireo dredger dia namboarin'ny US-based Ellicott Dredges- iray amin'ireo mpanamboatra tranainy tranainy indrindra. Raha ny marina, Ellicott Dredges dia namatsy ny dredger voalohany hitahiry an'i Jhelum ao 1960. Ny praiminisitra Jawahar Lal Nehru tamin'izany no nanendrena ny dredger.
Namboarina tamin'ny saran'ny crores Rs 12, ny dredger antsoina hoe Soya II sy Budshah II dia natao hanatontosana voly lalina. Aijaz Rasool, solontenan'i KEC Mumbai, Ellicot Dredges any India, hoy ny fampiharana ny dredging dia mandeha amin'ny Janbazpora sy Juhama any Baramulla.
“Tamin'ny fandehanana tsy an-kiato an'ireo toerana ireo dia afaka nandroaka ny zato taonan'ny tondra-drano tao amin'ny Lohasaha isika. Tsy tanteraka anefa izany raha tsy nisy ny dredger, ” Nampiany.
Nilaza ny tompon'andraikitra fa ny praiminisitra Jammu sy Kashmir Bakshi Ghulam Muhammad tamin'ny faran'ny '50s dia nanatona ny Governemanta Inde mba hitady torohevitra manam-pahaizana sy teknika hamaha ny olana. Eo ambany fitarihan'ny manampahaizana momba ny kaomisera foibe, dia natsangana ny drafitra Master ho an'ny fanodinana an'i Jhelum manomboka any Wullar ka hatrany Khadanyar.
“Na izany aza, mbola nitohy hatramin'ny 1986 ihany ny fandidiana ny fanodinana. Naato noho ny tsy fisian'ny loharano ampy sy ireo trano fananganana. Hatramin'izay dia nisy fandroahana an-taonina maro tao Jhelum noho ny fahasimban'ny haza trandrany. Io dia nampihena ny fahombiazan'ny tondra-drano avy amin'ny fantsom-pivoahan'ny Jhelum sy ny fiampangana mitondra herin'ny XusUMX cusecs ao amin'ny 35000 ka 1975 cusec amin'izao fotoana izao,”Hoy ​​ny manampahefana.
Ny sampan-draharahan'ny fanondrahana sy ny fanondranana tondra-drano tao 2009 dia nandefa ny tetik'asa crères Rs 2000 tany amin'ny Ministeran'ny loharanon-tsolika. Nahitana asa famerenana maro ny tetikasa ao anatin'izany ny fanatsarana ny fantsakan'i Jhelum efa misy ny fantsom-pifamoivoizana, ny fiarovana ary ny fanoherana ny fitrandrahana ary ny fampitomboana ny fahombiazan'ny hydraulic.
Na izany aza, ny ministera dia nankatoavina afa-tsy ampahany amin'ny tetikasa mandoa ny crs Rs 97 mba hanamorana ny fidirana an-tsehatra eo noho eo, ny fikambanan'ny milina sy ny fanondrahana ao Jhelum, indrindra ny fantson-drano tondradrano ao Srinagar sy ny renirano mivoaka ao Daubgah sy Ningli ao Baramulla.
Nilaza i Taj fa ny angon-drakitra rehetra mahakasika ny fitrandrahana rano sy ny fitrandrahana rano, ny famoahana ny rano ary ny fahaizan'i Jhelum nandritra ny taona 50 lasa izay dia namboarina ho an'ny nomerika.
"Izahay dia nanatanteraka fantsona fandefasana tondra-drano tamin'ny Srinagar sy faritra mifanakaiky ihany koa ankoatra ny fanamoriana ny lalana avy any Sonwar mankany Old City. Aorian'ny fahavitan'ny dredging dia mikasa ny manala ny fanodinana rehetra eny amoron'ny renirano hatrany Islamabad ka hatrany Baramulla isika. Rehefa afaka taona vitsivitsy, dia haverina amin'ny hatsarany miavaka i Jhelum, ” Nanampy i Taj.
Namboarina avy amin'ny DredgingToday